के साच्चिकै प्रेममा छन केएल राहुल सुनील शेट्टीकी छोरी आथिया शेट्टीसंग ? – ramechhapkhabar.com
के साच्चिकै प्रेममा छन केएल राहुल सुनील शेट्टीकी छोरी आथिया शेट्टीसंग ?
मुम्बई– टीम इन्डियाका क्रिकेटर केएल राहुल पछिल्लो केही समयदेखि भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भव्य प्रदर्शन गरिरहेका छन् । केएल राहुल अहिले अगस्ट ४ मा इङ्ल्याण्डविरुद्ध प्रारम्भ हुने ५ म्याचको टेस्ट सीरीज खेल्नका लागि आतुर छन् । केएल राहुल क्रिकेट मैदानमा जति लोकप्रिय छन्, त्यति नै मैदान बाहिर पनि चर्चामा रहन्छन् ।
राहुलको प्रेम–जीवनको कुरा गर्दा उनी बलिउडका अभिनेता सुनील शेट्टीकी छोरी आथिया शेट्टीसंग रिलेशनशिपमा छन् । दुवै लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन् । अहिले यी दुवै प्रेमी एक साथ इङ्ल्याण्डमा रहेको हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार पछिल्लो महिना यी दुवै वर्ल्र्ड टेस्ट च्याम्पियनशिपको फाइनलका लागि इङ्ल्याण्ड जानका लागि एक साथ निस्केका थिए । बीसीसीआईसंग भएको कुराकानीको क्रममा राहुलले आथियालाई आफ्नी प्रेमिका बताएका थिए ।
त्यस क्रममा एयरपोर्टमा हरेक खेलाडीले आफ्ना पार्टनरको नाम बताउनु पर्थ्यो । छोरी आथिया र राहुलको प्रेम सम्बन्धका बारेमा सुनिल शेट्टीसंग सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा सुनिल भन्छन् –‘यो एउटा समाचार होला, तर मसंग यी कुराहरुका बारेमा बोल्न अहिल केही पनि छैन ।’
लामो समयदेखि यी दुबैको प्रेम सम्बन्धको चर्चा भइरहेको छ । दुबैले सामाजिक सन्जालमा एक–अर्काको पोस्टमा कमेन्ट गर्छन् । केही समयअगाडि राहुलले सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो पोस्ट गरेका थिए, जसमा उनी आथियाका भाई अहान शेट्टीसंग देखिएका छन् । अब यी दुवैको सम्बन्धको बारेमा छिट्टै खबर आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।